सडक/यातायात - अब पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकसम्मको सडक कालोपत्रे ! - page 3
कास्की । विश्व चर्चित अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ स्थित पर्यटकीय घान्द्रुक गाउँसम्मको सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ । विसं २०५८ मा नयाँपुलबाट घान्द्रुकसम्म सडकको ट्रयाक खोलिएकोमा चालू वर्षबाट बाटो कालोपत्रे गरी पक्की बनाउन शुरु गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीको रु १९ करोड लागतमा नयाँपुलदेखि वीरेठाँटी हुँदै घान्द्रुकसम्मको १० किमि सो सडक सातदेखि नौ मिटर फराकिलो बन्ने कार्यालयका इञ्जिनीयर रामकुमार श्रेष्ठले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
अब काठमाडौंमा ठूला तथा साना मालबाहक सवारी चलाउन रोक !
काठमाडौं । काठमाडौंमा आगामि असार १ गतेबाट विहानदेखि बेलुकासम्म ठूला तथा साना मालबाहक सवारीको प्रवेश तथा सञ्चालनलाई निषेध गरिने भएको छ । बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म रिंगरोडसहित विभिन्न नाकाबाट मालवाहक सवारी ल्याउन पाइने छैन । यो व्यवस्था सार्वजनिक बिदाका दिन भने लागू नहुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । रिंगरोड क्षेत्रमा पनि जाम बढेकाले नाकाहरुमै रोक्ने गरी निर्णय आपत्कालीन र अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग भएका बाहेकका सवारीलाई तोकिएको क्षेत्रमा बिहानदेखि साँझसम्म प्रवेश र सञ्चालन नगर्न विभागले सूचित गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको जलविरे र पाँचकिलोमा पहिरो !
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पहिरोका कारण एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । शनिबार राति आएको वर्षाका कारण दुई ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार राति १० बजे सो सडकखण्डको जलविरे र पाँचकिलो भन्ने स्थानमा पहिरो गएको थियो । अहिले पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको र अझै दुई÷तीन घण्टा लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ । सो सडकखण्ड निर्माणका क्रममा अघिल्लो वर्ष पनि पहिरोका कारण यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
ओखलढुङ्गा । काठमाडौं रुम्जाटार–विराटनगर नियमित हवाई उडान हुने भएको छ । आज शुक्रबारदेखि हरेक साता सङ्घीय राजधानी काठमाडौंबाट ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार हुँदै प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरसम्मको हवाई सेवा शुरु हुने भएको हो । करीब तीन वर्षदेखि ठप्प रहेको रुम्जाटार विमानस्थललाई केन्द्र र प्रदेशको राजधानीसँग जोडेर पुनः उडान शुरु गर्ने तयारी भएको प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले जानकारी दिए। रुम्जाटार विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै यस क्षेत्रका नागरिकलाई आवतजावतमा निकै सहज हुने उनको भनाइ छ ।	थप पढ्नुहोस्
गुणस्तर निर्धारण नगर्दासम्म पक्की पुलको निर्माणकार्य स्थगित
गलेश्वर । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत राहुघाट नदीमाथि निर्माणाधीन पक्की पुलको निर्माणकार्य रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको छ । गिट्टी, बालुवालगायत पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म पुल निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
आजदेखि नारायणगढ-मुग्लिन सडक ६ घण्टा बन्द !
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिन सडक आजदेखि बिहीबार १४ दिनसम्म दैनिक ९ घण्टा गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ । मुग्लिनबाट तनहुँ जोड्ने निर्माणाधीन नयाँ पुलको दुवैतर्फको सडक सतहमा टेवा पर्खाल लगाउने तथा सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने भएकाले दिउँसो ४ घण्टा र राति ५ घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको पुल योजना मध्यक्षेत्र सेक्टर नम्बर दुईले जनाएको छ । सेक्टरका अनुसारका बिहीबारदेखि आउँदो ३० गतेसम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म र राति ९ बजेदेखि २ बजेसम्म सडक बन्द गर्न लागिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिनको सडक १४ दिन बन्द !
मुग्लिन । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिनको सडक बन्द हुने भएको छ । चितवन र तनहुँ जोड्ने मुग्लिनस्थित त्रिशूली नदीमाथि निर्माण भइरहेको आर्कब्रिजको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले दुवैतर्फको सडकको पर्खाल सतह कटिङ गरि टेवा पर्खाल लगाउने तथा सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने भएकाले १४ दिन बाटो बन्द गरिने पुल योजना मध्यक्षेत्र सेक्टर नम्बर दुईले सूचना जारी गरी जनाएको हो । योजनाका अनुसार जेठ १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म र राति ९ बजेदेखि २ बजेसम्म बन्द गरिनेछ ।	थप पढ्नुहोस्
यो बर्ष साठी हजार किमी सडक निर्माण सम्पन्न
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुनसम्ममा ६० हजार १६२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष करीब ३० हजार किमी सडक निर्माण भएकामा यो वर्ष करीब दोब्बर सडक निर्माण भएको हो । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष कालोपत्र, ग्राभेल र ट्र्याक खोल्ने समेत गरेर ६० हजारभन्दा बढी लम्बाइमा सडक निर्माण भएको हो । चालू आवको फागुनसम्ममा तीन हजार ९४६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । ग्राभेल सडक १३ हजार १५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ४३ हजार ६६ किलोमिटर रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।	थप पढ्नुहोस्
१ वर्षमै थपिए तीन लाख सवारी साधन !
काठमाडौं । चालू आवको फागुनसम्ममा तीन लाख १८ हजार ४७७ नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । नयाँ तीन लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्तासँगै देशभरमा यिनको सङ्ख्या ३५ लाख ३९ हजार ५१९ पुगेको छ । सङ्घीय संसद्मा आज सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरमा रहेका कूल सवारी साधनमध्ये ७८ दशमलव छ प्रतिशत मोटरसाइकल छन् । विसं २०४६÷४७ देखि गत आवसम्ममा देशभरमा जम्मा ३२ लाख २१ हजार ४२ सवारी साधन दर्ता भएका थिए । चालू आवको शुरुदेखि अहिलेसम्म पाँच लाख ५७ हजार २९८ ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । निजी लगानीमा बुद्ध एयरले सोमबारदेखि कोलकाता उडान थाल्ने भएको छ । उडानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार सुरुमा साताको तीन उडान हुनेछन् । सोमबार पूर्ण अक्कुपेन्सीमा उडाउने तयारी छ । बिहान आठ बजे नेपालबाट उड्ने जहाज १ घन्टा ३० मिनेट उडान दुरीमा कलकत्ता पुग्दैछ । कोलकातामा बुद्धले एटिआर ७२ जहाज उडाउँदै छ । कोलकातामा सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान हुनेछन् । गुवाहटीमा पनि उडाउने तयारी बुद्धले बनारस र कोलकातापछि तेस्रो गन्तब्य गुवाहाटी बनाउने भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्